Asehoy Low, AZ • Mass Body sy NuRu Massage
Aza mankaleo amin'ny Show Low. Fandriho ny otrao ara-nofo
Show Low dia tanàna iray ao amin'ny County Navajo, Arizona, Etazonia. Eo amin'ny Mogollon Rim any atsinanan'i Arizona no misy azy, ary 6,345 1,934 metatra ny haavony. Ny tanàna dia naorina tamin'ny 1870 ary nampidirina tamin'ny 1953. Araka ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2010, 10,660 ny isan'ny tanàna. Aza mankaleo amin'ny Show Low. Mamandrika ny fanorana ara-nofo.